Tulsi Bhagat အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Tulsi Bhagat အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၀:၁၅၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၂၃‎ အရေးမကြီး မွန်ဘာသာစကား ‎ 129.126.81.162 (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို 136.228.175.123 ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၀၄:၄၄၊ ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂‎ အရေးမကြီး ယူနီကုဒ် ‎ 136.228.172.214 (ဆွေးနွေး) ၏ ပြင်ဆင်မှုများကို Denny Lynn ၏ နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူသို့ နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခဲ့သည် စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၀၇:၂၆၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၃‎ အရေးမကြီး မင်းတုန်းမြို့ ‎ Reverted: unhelpful လက်ရှိ စာတွဲ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း
၁၆:၄၂၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း -၁၇၃၆၂‎ အရေးမကြီး ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ‎ Reverted2edits by 37.111.3.106 (talk) to last revision by Rachmat04. (SWMT) စာတွဲများ: နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း အစားထိုးခဲ့သည်
၁၅:၄၅၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၅‎ အရေးမကြီး စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ဦးစီးဌာန ‎ (GR) File renamed: File:DAR.jpg.png → File:Logo of Department of Agricultural Research, Myanmar.png Criterion2(meaningless or ambiguous name)
၀၇:၀၉၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၈‎ အရေးမကြီး ဝေသာလီပြည် ‎ (GR) File:Asokanpillar.jpg → File:Ashoka pillar at Vaishali, Bihar, India 2007-01-29.jpg File renamed A/c to #2 guideline by Tulsi Bhagat.
Tulsi Bhagat: စာမျက်နှာခွဲများ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Tulsi_Bhagat" မှ ရယူရန်